युग पाठकसँगको बहस : राज्य जातिवादी भएकैले संकट गहिरियो | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
कान्तिपुरको पाठकपत्र, पत्रिकाको सम्पादक हुँदै युग पाठक अहिले हस्तक्षेपकारी अध्येता बन्ने सकसपूर्ण प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका छन् । पाठकले इतिहास खोस्रेर केही नयाँ अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन्, जसले तीव्र बहस निम्त्याउने पक्का थियो । इतिहास निर्माण जटिल र सकसपूर्ण हुने गर्छ । तर, हामी भने इतिहासको त्यस्तो स्वप्निल कल्पना गर्छौं, जहाँ कुनै बाधा–अवरोध हुँदैन । डिस्कभरी न्युज नेटवर्कको रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले अध्येता युग पाठकसँग ‘इतिहास’, ‘इतिहास र राष्ट्रवाद’, ‘साहित्य र राजनीति’ तथा ‘मिडिया’ बारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
हामी हाम्रो मुलुकमा समावेशी समाज बनाएर देखाउँ भन्ने हो । राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा त्यसैका लागि आएको थियो । मानवीय समाज बनाउने राजनीतिक, सांस्कृतिक अभियान अझै आवश्यक छ, हाम्रोमा पनि । जहाँसम्म राष्ट्रको सीमाको कुरा छ, त्यो आजको विश्वको राजनीतिक यथार्थ हो । खास देशको नागरिक भएकै कारणले लाखौं मानिसले आज पनि आततायी युद्धको सामना गर्नुपरेको छ, लाखौं मारिइरहेका छन्, लाखौं शरणार्थी भइरहेका छन् । साम्राज्यवादी शक्ति नयाँ वैचारिक, राजनीतिक र आर्थिक हतियार लिएर गरिब मुलुकमाथि हस्तक्षेप गर्न आइरहेका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा हामीलाई सम्भवतः साइमन बोलिभरको जस्तो प्रतिरोधी राष्ट्रवाद चाहिएला । हुन त राष्ट्रवाद शब्द आफैंमा नश्लवादी र अन्धविश्वासमा आधारित छ, तैपनि हामीले कुनै विशेषणसहित राष्ट्रवादको विकास गर्नु आवश्यक छ । नेपालजस्तो गरिब र परनिर्भर मुलुकको राष्ट्रवादका दुई आयाम छन् । त्यसलाई राष्ट्रियता र प्रगतिशील राष्ट्रवाद भन्न सकिन्छ । तर, हाम्रोजस्तो मुलुकको राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद दुवै सधंै निरन्तर बन्ने र विकसित भइरहने प्रक्रियामा हुन्छन् । देशभित्रका समुदायगत विभेद, जातवादी विभेद, लिंगभेदजस्ता विभेद अन्त्य गर्दै सबै समुदायको अधिकारसहितको साझा राष्ट्रियता निर्माण गर्ने एउटा निरन्तर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अभियान हो । त्यसैगरेर आमजनताको हैसियत र आत्मविश्वास उठाउने निरन्तरको जनमुखी आर्थिक उन्नतिको प्रक्रियामार्फत प्रगतिशील राष्ट्रवादको जग हाल्न सकिन्छ । जति परनिर्भता घट्छ, जनताको आत्मनिर्भर हैसियत बन्दै जान्छ, राष्ट्रवादले एउटा आकार लिँदै जान्छ ।
तपाईंको प्रश्नमा निरपेक्ष अराजकताको गन्ध आयो । यो दुनियाँमा निरपेक्ष केही हुँदैन । यो मैले भनेको होइन, आइन्सटाइनले समय पनि सापेक्ष चीज हो भनेको सवा सय वर्ष हुन लाग्यो । भन्न त के पनि भनिन्छ भने कवि/लेखक स्वतः प्रगतिशील हुन्छन् । हाम्रो समाज दशकौं राष्ट्रिय र अराष्ट्रियको भेद हुर्काएर बस्यो । तर, यो देशभित्र रहेका वास्तविक विभेदमा आँखा चिम्लिएर । आखिर कोही कवि/लेखक हुनासाथ स्वतः प्रगतिशील हुन्छ, न त लेखनकर्म हाजिरिजवाफ प्रतियोगिता नै हो । साहित्य हाजिरिजवाफ प्रतियोगिताजस्तो गाउँस्तरीय, जिल्लास्तरीय, क्षेत्रस्तरीय वा राष्ट्रिय हुँदैन । त्यसैगरी कवि/लेखक पनि स्वतः अराजक हुँदैन । पुराना विचारका मानिसले नयाँ विचार लिएर आउने, पुराना परम्परा र पद्धतिलाई प्रश्न गर्ने कवि/लेखकलाई अराजक भनेर परिभाषित गर्ने गरेको देखिएको छ । यो त राजा नमान्नेलाई अराष्ट्रिय भनेजस्तो कुरो भो ।
पुनःप्रकाशित, ५ असोज २०७३ । २१ सेप्टेम्बर २०१६
Posted by admin on Sep 21 2016. Filed under Breaking News, Slide News, अन्तरवार्ता, पत्रपत्रिकाबाट, फोटो. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leavearesponse or trackback to this entry
1 Comment for “युग पाठकसँगको बहस : राज्य जातिवादी भएकैले संकट गहिरियो”
April 19, 2017 - 11:09 am
как зарабатывать деньги не выходя из дома без вложений http://hansovda.ru/Kak-zarabotat-dengi-na-sim-kartah-Smotrite-prikol-online-Ochen-smeshno-vy-soglasny.html играть и заработать